Ndiyazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo? Fumanisa ngeli qhinga! | Iindaba zeGajethi
¿Ungazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo? Kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo lo mbuzo ngewube lula ukuwuphendula, kuba uninzi lweekhompyuter zobuqu zicinga kuphela nge-IDE yohlobo lwediski; Ewe kunjalo, le meko ivele ukuba sinekhompyuter eqhelekileyo eneWindows, kunokubakho umahluko othile kwi-Mac kwaye apho, umsebenzisi angakhetha i-hard disk ye-SCSI ukufumana isantya esiphezulu kudluliso lwedatha.
Kunzima kakhulu ngoku ukuthetha malunga nohlobo lwe-IDE olunzima njengoko siphakamisile kumhlathi odlulileyo, kuba bekunjalo ithathe indawo ngokukhawuleza kwaye ngokulula nabanye ngokukhawuleza okukhulu, Itekhnoloji eyahlukeneyo kunye nomthamo omkhulu wokugcina. Ngapha koko, ukuba unekhompyuter kwaye ufuna ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nehard drive, siya kucebisa ngeendlela ezimbalwa kunye nezixhobo ezithile onokuziqhuba ukuphonononga olu lwazi.
1 Uyazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo kwiWindows
2 Ulwazi olukhethekileyo malunga nokuqhuba kanzima kwiWindows
2.1 Ingcaciso yePiriform
Uyazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo kwiWindows
Ukuba sisebenza kwiWindows, kukho indlela elula kakhulu yokwenza Ukuphonononga iimpawu zehard drive yethu "ngokukhangela"; Asibhekiseli "kumphathi wediski" kodwa kunoko kwi "optimizer" efanayo. Ukuze usebenzise eli qhinga, sicebisa ukuba ulandele la manyathelo alandelayo:
Khetha iqhosha Ukuqala yeWindows ukusuka ezantsi ngasekhohlo.
Kwibala lokukhangela bhala «ukwandisa»(Ucinga ukuba unenkqubo yokusebenza yesiNgesi). Ukuba unayo ngeSpanish, khangela «Sebenzisa iiyunithi»
Khetha isixhobo seWindows kwiziphumo ezibonisiweyo.
Ngokukhawuleza iwindow okanye ujongano lwesi sixhobo luya kuvulwa, nto leyo eza kubakho eya kusinceda sisebenzise ii-hard drive zethu. Ngaphandle kokwenza lo msebenzi (nangona ungawusebenzisa nangaliphi na elinye ixesha), phezulu konxibelelwano uya kufumana uluhlu lwazo zonke iidrive hard ezifakwe kwikhompyuter yakho.
Kwisithombe-skrini ebesikuphakamisile ngaphambili uya kuba nethuba lokuzijonga ezi zinto ziqhubayo kwaye phi, ikholamu yesibini ibonisa uhlobo oluhambelana nganye nganye. Singayichonga ngokulula enye enetekhnoloji ye-SSD, ingabi kwimeko efanayo nakwabanye abadweliswe apho, nangona kulula ukucacisa ukuba banokuba luhlobo lwe-S-ATA, kuba kunzima kakhulu kwikhompyuter ukuhlala kunye Uhlobo lwe-SSD nge-IDE enye.
Ngoku uyazi Ndazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo kwiWindows, siza kubona ezinye iindlela zokufumana ulwazi ngakumbi malunga nemodeli yethu ye-HDD okanye ye-SSD.
Ulwazi olukhethekileyo malunga nokuqhuba kanzima kwiWindows
Icebo esilikhankanye ngasentla liza kusinika ulwazi nje ngokubanzi malunga needrive zethu ezinzimaOko kukuthi, uhlobo lwetekhnoloji kwaye ke isinxibelelanisi abanokuthi basebenzise ngaphakathi kolwakhiwo lwabo. Ukuba into oyifunayo kukufumanisa ukuba wazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo kwikhompyuter yam ukufumana ulwazi oluthe kratya kunye nezobuchwephesha malunga ne-HDD yakho okanye i-SSD, sicebisa ukuba usebenzise esinye sezixhobo zimbini siza kuthi sizikhankanye ngalo mzuzu.
Ingcaciso yePiriform Yenye yazo, onokuyikhuphela simahla (ukuba awuceli nkxaso) kwiwebhusayithi esemthethweni. Xa uyiqhuba kwi-interface yezixhobo, zonke iidrayivu ezinzima ezixhumeke kwikhompyuter yakho ziya kuboniswa.
Iskrini-skrini esiyibeke kwinxalenye ephezulu sisibonisa nganye yezi zinto ziqhuba nzima kodwa, ngolwazi olukhethekileyo; Kanye apho sinokubona ukuba beza kuba luhlobo lweSATA kunye nesantya sokudlulisa abanaso.
ICrystalDiskInfo sesinye isixhobo esinomdla ongasisebenzisa simahla; Ukusuka kwiwebhusayithi yokukhuphela ungakhetha phakathi kwenguqulelo oza kuyifaka kwiWindows okanye ingxelo ephathekayo, le yokugqibela iyona icetyiswayo ukuze ungashiyi iirekhodi zokusetyenziswa kwayo ngaphakathi kweWindows.
Nangona kunjalo Esi sixhobo sikwasinika ulwazi olukhethekileyo, kodwa iyaqondakala kancinane kunale ingasentla esinokusinika yona. Apha sinethuba lokubona uhlobo lwediski esinayo, isantya sokufunda nokubhala, ukusebenza kwayo, iqondo lobushushu elikuyo ngoku, ixesha ebelikho kwezinye idatha ezininzi.
Nokuba yeyiphi na intswelo yakho xa isiza wazi ulwazi olubalulekileyo malunga nokuqhuba kwakho kanzima, Naziphi na ezinye iindlela ezintathu esele sizikhankanyile kweli nqaku zinokuba luncedo. Siyathemba ukuba usombulule ukungathandabuzeki kwakho kwaye sele uyazi Ndazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo efakwe kwikhompyuter.
Ngaba uyazi ezinye iindlela zokufumanisa? Sazise!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ndiyazi njani ukuba yeyiphi i-hard drive endinayo?
ilungile kakhulu kum syrian. enkosi!
Hayi Roi sitsho
Phendula Not Roi
I-SpaceX sele inefalcon yayo enkulu elungile